उपत्यकामा चक्काजाम: कता हरायो माओवादी बन्दमा चल्ने कनकमणिको ‘साझा यातायात’ ? - Nepal News - Latest News from Nepal
उपत्यकामा चक्काजाम: कता हरायो माओवादी बन्दमा चल्ने कनकमणिको ‘साझा यातायात’ ?
काठमाडौं,जेठ १३ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि लाग्ने शुल्क बढाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले वृद्धि गरेको जरिवाना फिर्ता गर्न माग गर्दै सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन् । आज विभिन्न यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले उपत्यकामा सवारी साधन चलाएका छैनन् । मोटरसाइकल र कार नीजि सवार साधन सडकमा कुदिरहेका छन्।
ट्राफिक प्रहरीले शुल्क २५ देखि २०० सम्मलाई जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ५०० देखि एक हजार ५०० सम्म पु¥याएको भन्दै चोकचोकमा सवारीसाधन थन्क्याएर चक्काजाम गरेका हुन् । नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघ लगायतका ८ वटा संस्था संयुक्त रुपमा जेठ १३ गते मुलुकभरका आफ्ना सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याएर सडकमा उत्रिएका हुन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सवारीसाधनबाहेक अरू कुनै पनि भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छैनन् । २०७२ असोज १४ गते ट्राफिक ऐन संशोधन गरी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई यही जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्राफिक जरिवाना वृद्धि भएको थियो ।
माओवादी बन्दका बेला र प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको ‘स्कटिङ’मा चलाउँने साझा यातायात यति बेला भने राजधानीमा गुमनाम अवस्थामा रहेको छ । विशेष सेवा सुविधा सहित सञ्चालनमा आएको महानगर यातायात पनि आज चलेकको छैन् । गृहले मंगलबार सार्वजनिक सवारी बन्द गरे कारवाही गर्ने चेतावनीसहित विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरे पनि निजी सवारी साधनहरू भने सञ्चालनमा छन् । चक्काजाम बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म कायम हुने जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले नियम तोड्ने सवारीलाई जेठ १ गतेदेखि न्युनतम् ५ सयदेखि अधिकतम १५ सयसम्मको जरिवाना लगाउन सक्ने नियम लागू गरेको थियो । त्यसको बिरोधमा ब्यबसायीले बन्द घोषणा गरेको हो ।
ट्राफिक प्रहरीले वृद्धि गरेको जरिवाना फिर्ता गर्न माग गर्दै सार्वजनिक यातायात बन्द
ट्राफिक जरिवानाको बिरोध: बन्दकर्ताको निशानामा सेनाको स्कुल बस